Uhlawula ngokuchofoza i-Intengiso ye-Amazon ekufanele utyalo-mali?
Abo bathengisi abafuna ukukhulisa i-intengiso yabo ye-intanethi bangazuza ngokusebenzisa i-Amazon PPC yentengiso. Le nkqubo ye-Amazon yenziwe ngokufanelekileyo kwaye ilawulwa ukubonelela abathengisi be-intanethi ngamathuba onke ukwenza amashishini athile kunye nokwandisa amanqanaba akho.
Kule nqaku, siza kuxubusha ngeendlela zePPC zokulungiselela ukuba ungasebenzisa ukukhulisa inzuzo yakho njengoko kunokwenzeka ukuba udidi lwakho lwemveliso.
Ama-Amazon ahlawulwa njani umsebenzi wokukhangela?
Ukuqala ukususela ekuqaleni makhe sixoxe ngento efunyenweyo ye-Amazon.
Ama-Amazon ufumana izigidi zokukhangela inyanga zonke. Uninzi lwabo abathengi abakulungele ukuthenga abathengi kwi-Amazon kunye nomnye ocacileyo uzimisele ukuthenga oko akufunayo - servicios hosting dominio. Bawubhala nje umnqweno wabo kwi-Amazon search box, kwaye inkqubo yokukhangela inikezela ngokufanelekileyo kwimikhiqizo yabo yombuzo ebonakala enokwanelisa umnqweno womsebenzisi. Ezi ziphumo zingathathwa njenge-organic. Nangona kunjalo, kukho iziphumo zokukhangela ezihlawulwayo abathengi abanokuzibona kwicala elifanelekileyo okanye ngaphantsi kweziphumo ze-organic. Ezi zinto ze-Amazon zixhaswe nazo zonke amathuba okuthengwa kakuhle njengoko zibonakala kubathengi abajoliswe kuyo abanenjongo yokuzithenga.
Ngokwale phulo, kufuneka uhlawule umsebenzisi ngamnye ngokuchofoza kwisibhengezo sakho. Kuhle kakhulu kufana neGoogle. Iindleko nganye ngokukhatya zingahluka kwi-niche enye yeemakethe kwenye. Nangona kunjalo, ukuba unendlela ehlakaniphile yokusebenzisa i-campaign yakho ye-Amazon ngokukhawuleza ngokukhawuleza, uya kufumana ukubuyela okuphezulu kwiityalo-mali.
Ukwenza yonke into ngokuchanekileyo, kufuneka uphuhlise isicwangciso sakho sokuthengisa kwaye uhambe kuzo zonke iingxaki ngaphambi kokuqala ukuvakalisa.
Njengomthetho, umkhankaso wokuphucula umgangatho kufuneka ube ngamazinga alandelayo:
enze uphando lweemarike ukufumana amagama okukhangela aphendulelwe ekuthengiseni;
unciphise uluhlu lwemigqaliselo yakho yokukhangela, ukuphelisa onke amagama angaguqukiyo;
ukwandisa amabhidi kumagama okukhangela aguqule kakuhle.
Ii-metrics eziphambili ze-intengiso ze-Amazon
Iindleko zokuthengisa zentengiso-ipesenti yemali yentengiso esetyenziswe kwiintengiso. Unako ukubala iindleko zokuthengisa zentengiso ngokuhlula ixabiso leentengiso ezipheleleyo ngokuthengisa.
Ukuthengiswa okuthethiweyo-inani elipheleleyo lemveliso yokuthengisa eye yaveliswa ngeveki enye yokuchofoza kwiintengiso zakho kwiziko. Unokujonga iitotenti zakho zokuthengiswa ngamnye kwiimveliso ezipapashwe kunye nezinye izinto kwiNgxelo yokuSebenza kweNkcazo.
Imbonakalo - le methrikhi ibonisa ukuba izihlandlo zakho ziboniswe kangakanani kwi-Amazon. Bonke ukuchofoza komsebenzisi kwithuba lokugqibela bangaguquzwa ngenxa yokuchofoza ukungasebenzi.
Ukuchofoza - inani leexesha iintengiso zakho zaqakrazwa. Kunzima kakhulu ukususa ii-clicks ezingavumelekanga kwingxelo yakho yentengiso.
Isinyathelo ngesinyathelo sikhokela indlela yokwakha i-Amazon PPC campaign
Lungisa uludwe lwakho
Into yokuqala okufuneka uyenze ngaphambi kokuba uqalise umkhankaso wokukhangisa nge-Amazon ngokukhawuleza ngokukhawuleza ulungise uluhlu lwakho ngokubhekiselele kwiimfuno ze-Amazon ezisisiseko. Akunangqiqo ukuvelisa izithuthi kwibala elincinci elincinci lokujonga. Yingakho kufuneka usebenze kwimiba nganye yohlu lwakho, uzalise zonke iinkalo kwaye ubencedise ngemigqaliselo yophando. Qinisekisa ukuba udonsa yonke imigaqo yokukhangela efanelekileyo ekujoliswe kuyo kwindawo ethile ekuhlaleni kwakho (kwisihloko, iibhola zebhola, inkcazo yemveliso, njl njl.)
Kufuneka ujonge ingqalelo impawu yemifanekiso yakho. Buza umfoto wezakhono ukuba athathe iifoto zezinto zakho kwaye uyilawule ngokulandela izikhokelo ze-Amazon (imvelaphi emhlophe, u-85% womfanekiso unikezelwe kwimveliso, isisombululo esiphezulu, amandla okutsalisa). Ukongezelela, kufuneka uqulunqe iinkcazo ezinkulu zemveliso zaza kukugxininisa kwiimveliso zakho kunye nezinto eziphambili. Kwaye ekugqibeleni, kufuneka ufumane iimpendulo ezintle. Ukuphononongwa kusebenza njengeyona ndawo ebalulekileyo kwi-Amazon ekuncediseni abathengi ukuba benze izigqibo zabo zokuthenga. Oku kubizwa ngokuba yi "trust factor" e-Amazon enokuchaphazela ngokuthe ngqo imveliso yokuguqulwa kwemveliso.
Khetha uhlobo olulungileyo lweentengiso
Kukho iintlobo ezimbini zokuthengisa kwiAngesi - umntu othumela iindwendwe kwiwebhusayithi yakho. ); kunye noyithumela kwimveliso yakho kwi-Amazon (i-Amazon Sponsored Products).
Ukuba ungathanda ukwenza imveliso yakho ibonakale kwi-Amazon, kunengqiqo ukusebenzisa i-Amazon Sponsored Products ad. Kule post, siza kuthetha kuphela ngale ndlela yeentengiso ze-Amazon.
Ngokweli phulo lokukhangisa, unokwazi ukugqamisa imveliso yakho kwimiphumo yangaphakathi ye-Amazon yophando lwemigca yakho izinto ezingenako ukubeka. Nangona kunjalo, ukuba sele unamaqela aphakamileyo aphezulu kuwo onke la magama, uya kufumana kabini ukuvezwa.
Ukuba unomtsha kwi-platform yase-Amazon, umkhankaso we-Amazon Sponsored Projekthi uza kukunika amandla amakhulu, ukubonisa iimveliso zakho phambi kwabathengi bakho. Ngaphandle koko, kunokukunceda ukwandisa indawo yakho kwi-Amazon SERP, ukhenketha i-traffic ejoliswe ngakumbi kunye nakwiphepha lakho lemveliso.
Yenza umkhankaso wokukhangisa
lixesha lokudala iphulo lakho lokuqala kwi-Amazon. Kule candelo, ndiza kuchaza indlela yokwenza lula kwaye ngokukhawuleza.
Ukusekela umkhankaso wakho wokukhangisa, kufuneka uhambe kwi-Amazon Seller Central kwaye ukhethe inketho yeMphathi wePlabathi. Apha uya kufumana iqhosha "Yakha i-Campaign. "Unqakraza kuyo ukuze uqalise. Apha ufanele udale igama lomkhankaso wesikhangiso sakho kwaye usethe uhlahlo lwabiwo-mali olulandelayo. Kufuneka uqaphele ngakumbi igama lakho ngeliphulo kuba kamva xa uza kuba neeprojekthi eziliqela kwi-akhawunti enye, unokungcola nayo.
Njengomthetho, ukuguqulwa kwakho kwimveliso kuqala ekuqaleni. Nangona kunjalo, ngokuhamba kwexesha, eli nqanaba liyakhula. Xa oko kwenzeka, iindleko zakho ngokukhawulayo ziya kuba ngaphantsi kuneyokuqala. Yingakho kuyinto encinane kakhulu ukuyibeka ngokukhawuleza.
Khetha uhlobo lokujolisa
Kukho iintlobo ezimbini zokujolisa kwi-Amazon advertising campaign. Ndiyakuncoma ukuba usebenzise ukujoliswa koqwalaselo njengoko unikeza ukulawula ngokupheleleyo phantsi kweprojekthi yakho yokukhangisa kwaye ikunika ithuba lokujolisa amagama angundoqo ocinga ukuba afanelekileyo kwishishini lakho.
Ukujoliswa ngokuzenzekelayo kunengqiqo ukuba awufuni ukutshala ixesha kunye nemizamo kwi-Amazon yakho yentengiso. Kule meko, unokuthembela ngokupheleleyo kwinkqubo ye-Amazon yophando. Kungaba yindlela epholileyo yokufumana iziphakamiso zegama elingundoqo ngaphandle kokusebenzisa nayiphi na ithuluzi elongezelelweyo. Apha ungabona amagama ophando ongazange ucinge ukuba ujolise.